बैंकले के आधारमा दिन्छ ऋण ? (महत्वपूर्ण जानकारी) ~ Banking Khabar
बैंकले के आधारमा दिन्छ ऋण ? (महत्वपूर्ण जानकारी)
हरेक बैंकले आफ्नो लगानीको सुरक्षा चाहन्छ । त्यसैले जस्तोसुकै ठाउँमा पनि बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दैन । कर्जा दिँदा बैंकले कर्जा लिने व्यक्तिको बारेमा जानकारी लिन्छ । उक्त व्यक्तिको विवरणले उसले कर्जा चुक्ता गर्न सक्ने प्रष्ट पारेमा मात्रै बैंकले कर्जा दिन्छ । यसका लागि बैंकले निम्न कुराहरुको जानकारी लिने गर्दछ ः